qofka aduunka ugu quruxda badan
Kala Soco Raaxada Guurka 10:30 AM
10 Actor Ee Bollywood Ee Ku Guulaystay Tartanka Gabadha Ugu Quruxda Badan Dunida.
Qormadan ayaa ah qaybtii labaad ee qormadeenii hore ee cinwaankeedu ahaa (10 Actor Ee Bollywood Ee Ku Guulaystay Tartanka Gabadha Ugu Quruxda Badan Dunida) oo aynu kaga hadlaynay hablaha actarada ah ee Bollywood ee ku guulaystay tartamada quruxda dunida.
Diana Hayden, waa gabadha 3aad ee ku guulaysatay tartanka Miss World pageant, iyada oo ku xigtay Reita Faria iyo Aishwarya Rai. waxa ay ku guulaysatay tartanka Miss India World sanadkii 1997, dabadeed waxa ay ka qaybgashay tartanka kale ee Miss world isla sanadkaasi. Waxa kale oo ay ku biirtay shirkada filimada ee Bollywood inkasta oo aanay ka midho dhalin hiigsigeedan labaad.
Waxa dadku ku qiimeeyaan qofka ugu caansan quruxda qarsoon ee dumarka Hindiya. Waa qofkii ugu horeeyey ee u tartama tartanka Miss India pageant, Iyo gabadha ku guulaysatay tartanka Miss World sanadkii 1994kii. Waa gabadha hogaamisa atarishadaha reer hindiya iyada oo ku guulaysatay 2ba abaalmarinood oo Filmfare Awards, 2ba Screen Awards iyo 2ba IIFA Awards oo ay ku heshay doorkeeda jilaanimo. Aishwaria aya ah mid kamida dadka ugu caansan uguna saamaynta badan wadanka hindiya, waxa kale oo saxaafada dunida looga yaqaan �most beautiful woman in the world� ama gabadha ugu quruxda badan dunida.
Sushmita Sen waa gabadhii asalkeedu Hindi aha ee ugu horeysay kuna guulaysata tartanka quruxda ee Miss Universe. waxa lagu caleemo saaray Dayanara Torres, Puerto Rico sanadkii 1994kii. waxay kubiirtay shirkada Bollywood iyada oo ku caan baxday gabadh aan haba yaraatee cabsoon.
Zeenat Aman, waa hindiyadii u horeysay ee loo caleemo saaray tartanka quruxda qaarada Asia �Miss Asia Pacific�. Kadib markii ay ku guulaysatay kaalinta labaad ee tartanka quruxda hindiya waxa ay ka qayb gashay kuna guulaysatay tartanka quruxda qaarada Asia sanadkii 1970. Tanina waxay sababtay inay ku biirto shirkada Bollywood iyada oo gabi ahaanba isku bedeshay actarad.
Rita waxa ay ahayd gabadhii u horeysay ee hindiyad ah kuna guulaysata tartan caalami ah. waxa loo caleemo saaray Miss World sanadkii 1966. Reita waxa ay ku jirtay garsoorayaashii tartanka quruxda gabdhaha ee wadanka hindiya sanadkii 1998kii, iyada oo marar kale kamid noqotay garsoorayaasha tartanka quruxda aduunka. waxa xasuus mudan tartankii ay garsooraha ka ahayd ee Miss World 1976 laguna qabanayey magaalada London kaas oo ay ku guulaysatay gabadha Cindy Breakespeare.